Ndi otu ederede | Nutri Nri
Nutri Nri bụ Spanish website lekwasịrị anya rụọ ọrụ na nri, ahụike na ahụike nke ndị ọrụ ya niile. Ọ e hiwere na 2007, si otú ibe ya aha na-nọgidere na-enwe ekele anyị ndi otu ederede na, na-ekerịta otu ụkpụrụ na ụkpụrụ, na-emepụta ọdịnaya dị mma kwa izu.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na sonye na ndi otu anyi dere ya na ahụmahụ, ị ​​nwere ike mezue ụdị ndị a y anyị ga-enweta na aka na gi asap.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ isiokwu niile anyị kpuchie kemgbe ọtụtụ afọ na malite imeziwanye ọdịmma gị ugbu a, ị nwere ike lee anya na ngalaba peeji.
A eke usọbọ na ike nri enthusiast, M hụrụ n'anya na-enyere ndị mmadụ na-edu a mma ndụ. Site na ijikọta nri kwesịrị ekwesị na mmega ahụ, ọ ga-ekwe omume ịme ihe kachasị mma kwa ụbọchị, na karịa ihe niile, nwee ọ happụ ka ukwuu.
Ọ na-amasị m ile anya nri na-edozi ahụ, ahụike na njirimara nke nri abụghị maka ịgwọta nsogbu kama maka ndụ nke m. N’ụlọ, egosiri anyị ụzọ nke ezigbo nri site na mgbe anyị dị obere, ebe a na-akwụghachi ụgwọ ọrụ karịa ihe niile. N'ihi ya, nnukwu mmasị m na gastronomy na ezigbo àgwà nke nri bilitere. Ruo taa, m bi n’ime obodo, ana m anụ ọkụ ọ bụla mgbe m ji ọ gladụ gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara nri, ezigbo nri na usoro ọgwụgwọ.
Amụrụ na Malaga na 1965, na m bụ omiiko banyere ụwa oriri na-edozi, na eke ahụ ike. Nri dị mkpa iji nwee ike ibi ndụ dị mma, ọ bụ ya mere m ji enwe mmasị ịmachi ihe oriri na nri, ebe m nwere ike inye ndụmọdụ ka mma.